एसएसबीले मारेका शाहलाई १० लाख क्षतिपूर्ति » खबरहरुको एउटै केन्द्र
एसएसबीले मारेका शाहलाई १० लाख क्षतिपूर्ति
आईतवार, चैत्र १३, २०७३ ०७:५० मा प्रकाशित !
१३ चैत​, काठमाडौं । भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले ६ वर्षअघि हत्या गरेका मोरङका वासुदेव साहको परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र उचित सम्मान गर्ने भएको छ। सोमबार हुने पूर्बाञ्चल क्षेत्रीय सुरक्षा बैठकपछि गृहमन्त्री निधिले शाहका परिवारलाई भोलि बिराटनगरमा क्षतिपूर्ति बापतको चेक हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
२०६७ जेठ ११ गते एसएसबीको गोली प्रहारबाट शाहको हत्या भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको २०६७ जेठ १३ गते बसेको बैठकले क्षतिपूर्तिका लागि गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै, आगामी स्थानीय निकायको निर्बाचन सुरक्षा योजना र त्यसको कार्यान्वय सम्बन्धमा सोमबार बिराटनगरमा पूर्बाञ्चल क्षेत्रीय सुरक्षा बैठक बस्ने भएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले क्षेत्रीय सुरक्षा नियकाका प्रमुखहरुलाई निर्बाचन सुरक्षाका सम्बन्धमा निर्देशन दिने कार्यक्रम रहेको छ । बैठकमा पूर्बाञ्चल क्षेत्रको सुरक्षा अबस्थाका बारेमा छलफल हुनेछ ।
यसैबीच, गृहमन्त्री निधिले सप्तरी घटनाको स्थलगत निरीक्षणका लागि त्यसतर्फ जाने तयारी मिलाउन गृहसचिब लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएका छन । तयारी पूरा भएपछि केही दिनभित्रै घटनास्थल पुगेर गृहमन्त्री निधिले सप्तरी घटनामा मारिएका पाँच जनाका परिबारलाई रु १० लाखका दरले राहत बितरण गर्नुहुने कार्यक्रम छ ।
PREVIOUS POST Previous post: औषधि व्यवसायमा परिवर्तन जरुरी
NEXT POST Next post: बुर्तिवाङको जिप दुर्घटनामा १ को मृत्यु, ३ घाइते
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, चैत्र १३, २०७३ ०७:५०
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, चैत्र १३, २०७३ ०७:५०
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, चैत्र १३, २०७३ ०७:५०
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, चैत्र १३, २०७३ ०७:५०
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, चैत्र १३, २०७३ ०७:५०